Igumbi elinomgangatho omnye e-Urussuquara: ukuzonwabisa emlanjeni naselwandle - I-Airbnb
Igumbi elinomgangatho omnye e-Urussuquara: ukuzonwabisa emlanjeni naselwandle
Igumbi lakho lokulala e igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle sinombuki zindwendwe onguClenir
UClenir ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-100% yeendwendwe zakutshanje.
I-suite ekhululekileyo ene-air conditioning, iTV, i-Wi-Fi kunye ne-minibar, ibekwe kwindawo entle, epholileyo, ilungele ukuphumla kunye nokuzonwabisa.
I-Urussuquara Beach kunye ne-Barra Sêca (uLwandle lweNdalo) zikumda ophakathi koomasipala baseLinhares kunye ne-São Mateus. Zombini ulwandle kunye noMlambo i-Ipiranga zifanelekile ukuloba, ukuhlamba, ukuhamba ngeenqanawa kunye nemidlalo.
Kukho iziseko ezingundoqo: iindawo zokutyela, ivenkile yokubhaka, indawo yokutyela kunye nevenkile enkulu.
Ngaphandle kwebhanki ye-24h, isikhululo segesi kunye nekhemesti.
*Asizifumani izilwanyana zasekhaya
Igumbi elinomgangatho omnye, eline-air conditioning, iTV, ikhabethe, minibar, idesika kunye ne-wi-fi.
Sibonelela ngesidlo sakusasa esimnandi esenzelwe wena, esiza kunikezelwa ngokuthotyelwa kwemithetho yokhuseleko ukunqanda ukuxinana.
Ukucoca kuyinyani eqinisekileyo kwaye, ngenxa yokhuseleko lwakho kunye nentuthuzelo enkulu, sinikezela ngekhithi eneeglavu kunye nemaski kwi-suite, kunye nezinto ezinje: isicoci sezinto ezininzi, i-70 ° yotywala, ijeli yotywala, isepha yesandla elulwelo kunye netawuli zephepha.
Sinikezela ngedama lokuqubha kunye nommandla we-gourmet (ngenkqubo yogcino), kunye nepali yokuloba kunye ne-tennis ye-paddle, ukunyusa ukuphumla kwakho kwiindonga zomlambo okanye ulwandle.
Ukuwela isikhephe ukuya eNaturista Beach kuqhutywa sithi.
29" HDTV ene-I-Chromecast
Iilali zase-Urussuquara kunye ne-Barra Sêca zenza indawo ezolileyo kunye ne-rustic. Indawo entle kwabo bafuna ukuzola kunye nokunxibelelana nendalo. Iilwandle zihlala zihlala abantu abafuna ukuphumla emanzini (ukuhlamba umlambo, ukuloba, ukukhwela amaphenyane). Ulwandle lwase-Urussuquara lunobuhle bendalo obumangalisayo, kunye neenduli zesanti, iindunduma kunye neemangrove.
Umlambo we-Ipiranga, kwindawo ephantsi, ungasetyenziselwa ukuqubha kunye nemidlalo ye-nautical, efana nokuma, ukuhamba ngenqanawa, njl.
Kukwakho nolwandle lwendalo, olufikelelwa kuphela ngesikhephe. Le ndawo inika umthunzi, amagumbi okuphumla kunye nebarbecue. Ukuwela kuqhutyelwa kwilali yabalobi, ngathi.
Inebhari, iindawo zokutyela, ii-snack bars, iindawo zokubhaka kunye nevenkile enkulu.
Akukho bhanki ye-elektroniki, akukho sikhululo segesi okanye iikhemesti.
Umbuki zindwendwe ngu- Clenir
Abanini bahlala kwipropati kwaye bayafumaneka kuzo naziphi na iimfuno.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Linhares